Semalt: Ireo teknolojia farany dia mamonjy olona an-tapitrisany
Ross Barber, Semalt Mpitarika Success Manager, dia handeha hizara tantara mahatalanjona ny fomba nanampian'ny UNICEF ny tanora nampiasa ny sehatra SMS manonona anarana antsoina hoe U-Report.
Ny olona dia mihevitra ny UNICEF ho tompon'andraikitra amin'ny zavatra ilain'ny ankizy hatramin'ny namonjena ity tanora tsy hita isa ity. Raha ny tena izy, dia manaporofo ny tenany amin'ny valinteniny haingana amin'ny Rivo-doza Irma. Miaraka amin'ny U-Report, sehatra SMS ahitana fanamafisam-peo ny sary, dia nanome torolàlana momba ny fampahalalam-baovao sy ny fiarovana amin'ny fomba mahomby ho an'ireo tra-doza azo atao. Na dia tantara tsotra fotsiny aza, ary tena mahafinaritra - vps hosting america.
fangatahana hetsika tsy misy fepetra
Nandritra ny 2 septambra, ny Biraon'ny UNICEF ao Amerika Latina sy Karaiba dia nifandray tamin'ireo manam-pahaizana avy amin'ny Foibe Innovation Center an'ny UNICEF. Ny anton'izany dia ny fananganana U-Report ao Karaiba sy hampiroboroboana izany amin'ny Facebook, ho fanehoan-kevitra amin'ny fanavaozana ny lalan'ny rivo-doza Irma.
fomba mahazatra fifandraisana
Ny sehatra fifandraisan-davitra vaovao antsoina hoe U-Report, dia mampiasa teknolojia SMS na SMS mifototra amin'ny sary fanatsarana, ho an'ny fanangonana mahasoa sy fampielezana ny vaovao manan-danja ho an'ny tanora. Ankoatr'izay, ny fampiharana dia midika ho azy ireo mba handrenesana ny fahasahiranany sy fangatahana fanampiana. Noho izany, ny U-Report dia manamarina tokoa fa fanavaozana revolisionera ho an'ny tombontsoan'ny vahoaka..
Taloha, ny U-Report dia nampiasaina mba hisorohana ny fiparitahan'ny otrikaretina Ebola mahafaty any Liberia tamin'ny taona 2014. Noho ny fangatahana, ireo UNICEF sy ireo fikambanana maro samihafa dia afaka mandefa ny fitsapan-kevitra mba hamantarana ireo olana iainan'ny olona sy hizara aminy Ireo fampahalalana sy torolàlana mahavelona voavonjy.
Ny loharanom-baovao tokana
Anisan'ireo ankizy 10,5 tapitrisa mipetraka any amin'ireo firenena izay miatrika ny Rivo-doza Irma, manodidina ny antsasak'izy ireo dia nilaza fa ny U-Report no loharanom-baovao sy toro-hevitra azo omena. Raha mandalo ny tafio-drivotra dia mbola mampiasa ny sehatra i UNICEF hanangona vaovao momba ny toerana misy ny tanora mila fanampiana. Aorian'izany, ny UNICEF dia mety manomboka mampiasa valiny mifanaraka amin'izay ilain'ny voakasika.
Fidiram-bola avy any Copenhague
Ho valin'ny mahantra dia manomboka manao asa ny Division UN Suppliers ao Copenhagen. Miaraka amin'ny toeram-pivarotana lehibe indrindra eran-tany, afaka manome fanampiana ho an'ireo niharam-boina izy ireo. Ankehitriny, nanomboka nanondrana entana izy ireo ary nidina tao anaty fiaramanidina.
Ny fanantenana tsy ho faty intsony
Nanao valin-kafatra tao amin'ny U-Report, ny UNICEF, tamin'ny valantseran'ny SMS-n'izy ireo, tamin'ny famoahana ny tanora ho fifandraisana sy loharanom-baovao. Misaotra ny U-Report, miaraka amin'ny teknolojia fitetezana sy ny fanamafisana ny sary, dia niely haingana ireo zatovo miisa folo sy antsasak'alina izay efa niatrika ny rivo-doza, hamonjy aina tsy tambo isaina. Ankehitriny, ny UNICEF dia mandefa fanampiana sakafo sy fanampiana hafa ho an'ireo tra-boina. Amin'ny ankapobeny, ny fanantenana dia tsy ho faty raha mbola mijanona ho mavitrika amin'ny fanampiana ny hafa ny olona.